Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပေကျင်း အိုလံပစ်အတွက် ကျန်းကျားခိုပြိုင်ပွဲဇုန်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ရှီကျင့်ဖိန် တရုတ်နိုင်ငံ အိုလံပစ် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ရှီကျင့်ဖိန်က ထိုက်ကျီချိန် ရထားဘူတာရုံကို ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေစဉ် (ဆင်ဟွာ) Sport
ရှီသည် ဟဲပေပြည်နယ် ကျန်းကျားခိုမြို့သို့ ပေကျင်း-ကျန်းကျားခို အမြန်ရထားလမ်းမှ သွားရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှီသည် ပြိုင်ပွဲနေရာများနှင့် အားကစားသမားကျေးရွာ အနီးရှိ ထိုက်ကျီချိန် ဘူတာရုံ၊ အမျိုးသား စကီးအဝေးခုန်စင်တာနှင့် အမျိုးသား နှင်းလျှောစီးနှင့် သေနတ်ပစ်စင်တာတို့ အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ရှီကျင့်ဖိန်က ထိုက်ကျီချိန် ရထားဘူတာရုံကို ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ရှီကျင့်ဖိန်က ဟဲပေပြည်နယ် ကျန်းကျားခိုမြို့ရှိ အမျိုးသား စကီးအဝေးခုန်စင်တာအား ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ရှီကျင့်ဖိန်က ဟဲပေပြည်နယ် ကျန်းကျားခိုမြို့ရှိ အမျိုးသား စကီးအဝေးခုန်စင်တာတွင် အားကစားသမားများနှင့် နည်းပြများကို ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က နှုတ်ဆက်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ရှီကျင့်ဖိန်က ဟဲပေပြည်နယ် ကျန်းကျားခိုမြို့ရှိ အမျိုးသားနှင်းလျှောစီးနှင့် သေနတ်ပစ်စင်တာကို ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ရှီကျင့်ဖိန်က ဟဲပေပြည်နယ် ကျန်းကျားခိုမြို့ရှိ ကျန်းကျားခိုပြိုင်ပွဲဇုန်တွင် အားကစားသမားများ၊ နည်းပြများ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရှီက ကျန်းကျားခို အားကစားပြိုင်ပွဲဇုန်ရှိ အားကစားသမားများ၊ နည်းပြများ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းများကိုလည်း နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ပေကျင်းမြို့နှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ပူးတွဲကျင်းပမည့် ကျန်းကျားခိုမြို့ကို ချိတ်ဆက်ထားသော မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်က စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
ကျန်းကျားခို ပြိုင်ပွဲဇုန်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပေကျင်း အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွင်း စည်းမျဥ်း ၆ မျိုးရှိသော ဆီးနှင်းအားကစားနှစ်မျိုး၏ ပွဲစဉ် ၅၀ ကို လက်ခံကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Xi Focus: Xi inspects Zhangjiakou competition zone of Beijing 2022
Source: Xinhua| 2021-01-19 19:23:48|Editor: huaxia
ZHANGJIAKOU, China, Jan. 19 (Xinhua) -- Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, on Tuesday inspected the Zhangjiakou competition zone of the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games.
Xi arrived in Zhangjiakou, Hebei province by taking the Beijing-Zhangjiakou high-speed rail. He inspected the Taizicheng rail station close to the competition venues and athletes' village, the National Ski Jumping Center, and the National Biathlon Center.
Xi extended greetings to athletes, coaches and representatives of operation teams and construction staff in the Zhangjiakou competition zone.
The high-speed railway line connecting Beijing and its 2022 co-host Zhangjiakou, went into operation on December 30, 2019.
The Zhangjiakou competition zone will host 50 events of six disciplines across two snow sports during Beijing 2022. Enditem
1-2- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, inspects the Taizicheng rail station close to the competition venues and athletes' village of the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games in Zhangjiakou, north China's Hebei Province, Jan. 19, 2021. Xi on Tuesday arrived in Zhangjiakou by taking the Beijing-Zhangjiakou high-speed rail. He inspected the Taizicheng rail station, the National Ski Jumping Center and the National Biathlon Center. (Xinhua/Ju Peng)
3-5- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, inspects the National Ski Jumping Center in Zhangjiakou, north China's Hebei Province, Jan. 19, 2021. Xi on Tuesday arrived in Zhangjiakou by taking the Beijing-Zhangjiakou high-speed rail. He inspected the Taizicheng rail station close to the competition venues and athletes' village of the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games, the National Ski Jumping Center, and the National Biathlon Center. (Xinhua/Ju Peng)
6- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, extends greetings to athletes and coaches at the National Ski Jumping Center in Zhangjiakou, north China's Hebei Province, Jan. 19, 2021. Xi on Tuesday arrived in Zhangjiakou by taking the Beijing-Zhangjiakou high-speed rail. He inspected the Taizicheng rail station close to the competition venues and athletes' village of the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games, the National Ski Jumping Center, and the National Biathlon Center. (Xinhua/Wang Ye)
7- 8- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, inspects the National Biathlon Center in Zhangjiakou, north China's Hebei Province, Jan. 19, 2021. Xi on Tuesday arrived in Zhangjiakou by taking the Beijing-Zhangjiakou high-speed rail. He inspected the Taizicheng rail station close to the competition venues and athletes' village of the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games, the National Ski Jumping Center, and the National Biathlon Center. (Xinhua/Ju Peng)
9- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, talks with athletes, coaches and representatives of operation teams and construction staff in the Zhangjiakou competition zone of the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games while visiting the National Biathlon Center in Zhangjiakou, north China's Hebei Province, Jan. 19, 2021. Xi on Tuesday arrived in Zhangjiakou by taking the Beijing-Zhangjiakou high-speed rail. He inspected the Taizicheng rail station close to the competition venues and athletes' village, the National Ski Jumping Center, and the National Biathlon Center. (Xinhua/Wang Ye)
Next Article အမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲနေရာ ရှစ်ခု ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၊ အားကစားကျေးရွာတွင် အဆောက်အအုံ ၇၈ လုံး သတ်မှတ်ပြီးစီး